Dowladda imaaraadka oo balanqaaday in somaliya ay ka taageereyso ammaanka | Raascawad
Dowladda imaaraadka oo balanqaaday in somaliya ay ka taageereyso ammaanka
Doha(Raascawad Media)-Dowladda isu taga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay ka go,antahay in sidii ay somaliya ugu caawin lahayd amaanka iyo deganaanshaha dalka,sida uu xaqiijiyey sarkaalk sare oo ka tirsan dalkaasi.
Safiirka imaarad ee dalka Belgium Maxamed Ciisa Al Suwaidi ayaa xusay in imaaraadka uu doonayo in somaliya ay sameyso isbadalo ku aadan dhinaca siyaasada horumarka iyo ammaanka.
Mr Suwaidi oo ka qayb galayey shirkii lagu soo geba gabeeyay magaalada Brussels ee looga hadlayey arimaha somaliya ayaa sheegay in imaaraadka uu xoojinayo taageerada uu siiyo shacabka iyo dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Safiirka ayaa xusay in dowladda isu taga imaaradka carabta ay hore somaliya ugu caawisay dhinaca dhinaca tababarada ciidamada ammaanka iyo arimaha gargaarka bani,aadinimo.
Waxaana uu intaasi ku daray ay sii wadi doonaan taageerada joogtada ah ee siiyaan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo horumaro la taaban ka sameysay dhinacyada ammaanka iyo siyaasada dalka.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa xumaaday xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda isu taga imaaraarka carabta taasoo ka dhalatay heshiiska imaaradka iyo maamulka Somaliland ee ku aadan shirkada DP world